Workflow, mianatra manery 200% amin'ny iPhone sy iPad | Vaovao IPhone
iOS dia manana fetrany, zavatra izay na dia isika izay tena tia ny rafitra fiasan'i Apple aza dia tsy maintsy ekena. Hatreto, ary heveriko fa mbola haharitra ny fotoana hiovan'ny zavatra, ny famokarana ny iPhone na ny iPad dia lavitra lavitra ny an'ny solosaina birao, fa misy kosa ireo fampiharana izay mampihena be an'io elanelana io, ary iray amin'ireo izy ireo, ny tsara indrindra amin'izy ireo, dia tsy isalasalana fa Workflow. Ity rindranasa ity dia tena fahagagana ho an'ireo izay mahalala ny fomba hanararaotana an'io, fa Na isika izay tsy manam-pahalalana na manam-potoana hidirana lalina ao aminy aza dia afaka mivoaka betsaka amin'izany., ary izany indrindra no tianay haseho anao anio.
Ho an'ireo izay tsy mahalala an'io, Workflow dia rindranasa mamela anao hamorona fanitarana sy hetsika, izay azonay ampifangaroina, ary samy mampiasa serivisy web sy rindranasa iOS zanatany na rindranasa an'ny antoko fahatelo hahazoana valiny mahagaga. Te misintona horonantsary YouTube amin'ny roul ianao? Sa te misintona ny horonantsary horonan-tsary YouTube amin'ny endrika MP3? Mandika lahatsoratra amin'ny teny alemanina amin'ny teny espaniola? Hisy kaody QR? Ireto misy ohatra vitsivitsy tsotra kokoa azontsika ampiasana ilay fampiharana, saingy misy maro hafa.
Satria ny Workflow dia ahafahanao mamorona ny dalanao manokana, eny, ilaina ny manana fahalalana teknika avo na fotoana be dia be hampiharana, na tsara kokoa, izy roa. Tena mora ny afaka mamorona hetsika fototra, satria ny mekanisma dia tena tsotra: misintona ary milatsaka avy ao amin'ny galeran'ny hetsika, fa ny fahasarotana dia azo atsangana amin'ny ambaratonga misy olona vitsy dia vitsy.
Teo no nisy ny Gallery of workflows izay azonao idirana avy amin'ilay fampiharana mihitsy miaraka amin'ny tsy manam-petra ny hetsika sy ny fanitarana ho an'ny karazana asa rehetra. Azonao atao ny mihazakazaka ny fanitarana avy amin'ny rindranasa rehetra amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra fizarana (ny kianja misy zana-tsipìka) ary avy eo dia tsindrio ny "Run Workflow", ireo izay mifanaraka amin'ny app misy anao dia hiseho ary tsy maintsy tsindrio ilay tianao te hihazakazaka. Saingy azonao atao ihany koa ny manatanteraka hetsika mivantana toy ny hoe fampiharana izany, toy ny kaody QR ho an'ny tohatra.
Raha toa tsy dia toa anao loatra ity galeriana mampiditra ny fampiharana ity, mbola betsaka noho izany ny Internet. Mila manao fikarohana fotsiny ianao miaraka amin'ny teny mety ary azo antoka fa hahita safidy isan-karazany amin'ny zavatra tadiavinao ianao. Raha manao izany amin'ny fitaovanao iOS ianao dia afaka mametraka izany extension na hetsika izany mivantana, nefa tsy mila manao zavatra hafa. Pejy iray ahitanao hetsika mahaliana maro workflow-vcs.de na dia betsaka aza ny ao amin'ny reddit sy tranonkala hafa mitovy amin'izany. Raha te hizara ny hetsika tianao indrindra ianao dia azonao atao izany amin'ny fanehoan-kevitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Workflow, mianatra mamintina 200% amin'ny iPhone sy iPad